တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပန်းချီလိပ်တစ်ခုမှ နဂါးကိုးကောင် အပိုင်း၊ ရေးဆွဲသူ ချန်းရုံ (၁၂၄၄ - စုန့်မင်းဆက်)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘော့စတန် အနုပညာပြတိုက်
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ (တရုတ်: 中國神話; ပင်ရင်: Zhōngguó shénhuà) သည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း စာပေမှတ်တမ်းများဖြင့်သော်လည်းကောင်း လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့သော ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် ဒေသဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ရိုးရာအစဉ်လာများမှ အမျိုးမျိုးသော ဒဏ္ဍာရီများပါဝင်သည်။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီသည် တစ်မူတည်းဖြစ်သည့် အမျိုးအစားမဟုတ်သကဲ့သို့ ရှေးခေတ်ဟန်လူမျိုးများကြား၌ပင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းစနစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပေ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ သမိုင်းခေတ်များ၊ ပထဝီဒေသဆိုင်ရာ နယ်မြေများ၊ အမျိုးမျိုးအစားစားသော လူတန်းစားများ စသည်တို့၏ ရိုးရာအစဉ်လာများ၌ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီကို တွေ့ကြုံနိုင်သည်။ တရုတ်ပြည်သည် များပြားလှသော ဒဏ္ဍာရီအစဉ်လာများပေါက်ဖွားရာ ဇာတိလည်းဖြစ်၍ ဟန်လူမျိုးများ၏ ဒဏ္ဍာရီ၊ ဟန်ခေတ်မတိုင်မီ ဟွားရှီးလူမျိုးများ(Huaxia)၏ ဒဏ္ဍာရီ၊ တိဘက်ဒဏ္ဍာရီ၊ တားကစ်ဒဏ္ဍာရီ၊ ကိုရီးယားဒဏ္ဍာရီနှင့် အခြားများစွာသော ဒဏ္ဍာရီများပါဝင်သည်။ သို့သော် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီသည် တရုတ်ဘာသာစကား၌ပါသော အကြောင်းအရာများကို အလေးပေးသည့်အနေထားရှိသည်။
ဒဏ္ဍာရီခပ်များများတွင် အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းသော လူနှင့် သက်ရှိများ၊ မှော်အစွမ်း တန်ခိုးအစွမ်းသုံးခြင်း စသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများသည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော ခေတ်၊ ဒေသများ၌ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်လေ့ရှိသည်။ အခြားဒဏ္ဍာရီများကဲ့သို့ပင် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီကို အချက်လက်မှန်ကန်သောသမိုင်းမှတ်တမ်းများဖြစ်သည်ဟု အတိတ်တစ်ချိန်က ယူဆခဲ့ကြသည်။ အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆကြ၏။ တရုတ်ရိုးရာပုံပြင်များနှင့်တကွ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီသည် တရုတ်ရိုးရာဘာသာတရား၏ အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဟိုးရှေးအတိတ်က ဖြစ်ရပ်များ၊ ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းများစွာ၌ ရိုးရာပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်ပဖြစ်မှတ်တမ်းတင်သည့် ပုံစံနှင့် အခြားတစ်ခုမှာ ဒဏ္ဍာရီဆန်သောပုံစံဖြစ်သည်။.
ဒဏ္ဍာရီများစွာ၌ ဖန်ဆင်းခြင်း၊ စကြာဝဠာသဘောတရား၊ နတ်ဘုရားများ၊ နေထိုင်သူများ စသဖြင့်ပါဝင်သည်။ အချို့သောဒဏ္ဍာရီများတွင် ဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီ၊ လူသား၊ သက်မဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၏ ဇာတ်မြစ်များပါဝင်သည်။ အချို့၌ တရုတ်ပြည်၏ဇာတ်မြစ်အကြောင်းပါရှိ၍ အချို့တွင် သမိုင်းမတင်မီခေတ်များ အစဉ်အဆက်ပြသမှုလည်းပါဝင်ရာ ပါဝင်မှုအများအပြား၌ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်သော သူရဲကောင်း၊ ထိုသူသည် ပြည်သူပြည်သားများအား အိမ်ဆောက်နည်း၊ ချက်ပြုတ်နည်း၊ စာရေးနည်းများကိုသင်ပေးသူ (သို့) တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုမှ (သို့) တော်ဝင်မင်းဆက်မှ ဘိုးဘေးတစ်ဦးဖြစ်ပေမည်။ ဒဏ္ဍာရီများသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်လျက် ရှိ၏။ များစွာသော ဒဏ္ဍာရီများသည် ကပြခြင်း၊ အခမ်းအနားများ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစသည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် နှုတ်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်ချက်များဖြစ်၏။
၂.၁ ဒဏ္ဍာရီလာ ဧကရာဇ်များ
၂.၄ ရှေးအကျဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်သုံးပါး၊ ရှေးကျသောဧကရာဇ်ဘုရင်ငါးပါး၊ မင်းဆက်သုံးဆက်
၂.၅ နွီဝါးနှင့် ဖူရှီး
၂.၅.၁ နွီဝါး ကမ္ဘာအားကယ်ဆယ်ခြင်း
၂.၅.၂ ဖူရှီးနှင့် မြစ်ဝါမြစ်မြေပုံ
၂.၆ ရှန်းနွန်နှင့် မီးတောက်ဧကရာဇ်
၂.၇ ဟွမ်းတိ၊ အဝါရောင်ဧကရာဇ် နှင့် လေ့ဆူ
၂.၉ ယောင် နှင့် ရွှမ်
၂.၁၀ ကွမ်း၊ ယွီနှင့် ရေကြီးမှုကြီး
၂.၁၁ ပထမဦးဆုံး မင်းဆက်များ
၂.၁၂ နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာသော မင်းဆက်များ
၃ အရေးပါသော နတ်များနှင့် ဒဏ္ဍာရီလာ ပုဂ္ဂိုလ်များ
၃.၂ တောက်ဝါဒ (တာအို) နှင့် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ
၃.၂.၂ မသေသူ ရှစ်ပါး
၃.၃ ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုးမှုများ
၃.၄ ကွန်ဖြူးရှပ် လွှမ်းမိုးမှု
၃.၅ ရိုးရာဘာသာရေးနှင့် ဒဏ္ဍာရီတို့ကြား မျှဝေသုံးစွဲခြင်း
၃.၅.၂.၁ အသက်ရှည်ခြင်း ကြယ်နတ်ဘုရား
၃.၆ တမလွန်ဘဝနှင့် မိသားစု
၃.၆.၁ မသေသောသူများ (ရှန်)
၃.၆.၂ သရဲတစေ၊ ဝိဉာဉ်များ
၃.၆.၃ အားလပ်ရက်များနှင့် ပွဲတော်များ
၃.၈.၁.၁ ဟို့ရီ နှင့် နေဆယ်စင်း
၃.၈.၂.၂ ဝုကန်းနှင့် မှော်သစ်ပင်
၃.၈.၂.၃ လပေါ်မှာ ယုန်ဝပ်လို့
၄ ဒဏ္ဍာရီလာ အကောင်များ
၄.၁ အသိဉာဉ်ရှိသော အကောင်လေးမျိုး
၅ ဒဏ္ဍာရီလာ အပင်များ
၆ ဒဏ္ဍာရီလာ ပစ္စည်းများ
၇.၁ လိပ်ခွံ နွားရိုးများ
စကြဝဠာ၊ ကမ္ဘာမြေ၊ ကောင်းကင်၊ မြောက်များလှသော နတ်များနှင့် သတ္တဝါများအားဖန်ဆင်းမှုအကြောင်း ထင်မြင်ယူဆချက်များစွာ၊ လူသားမျိုးနွယ်စုများစွာ၏ ဇာစ်မြစ် စသည်တို့သည်တရုတ်ပြည်ကြီး၌ နှစ်ထောင်ချီ၍ လည်ပတ်ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီများ၌ ဟွမ်းတိ (သို့) ယန်တိ မှဆင်းသက်လာကြသော ဟန်လူမျိုးများကဲ့သို့ သီးသန့်မျိုးနွယ်စုများ၏ဇာစ်မြစ်၊ လူသားများ၏ အစ၊ စကြာဝဠာနှင့် လောကရှိအရာရာတိုင်းတို့၏ ဇာစ်မြစ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။
အသိများသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ ပန်ကူး (Pangu) ဖြစ်၏။ အခြားသောရင်းမြစ်များကြားတွင် ပန်ကူးအကြောင်းကို တာအို စာရေးဆရာ ရှူ ကျန်း (Xu Zheng) က အေဒီ ၂၀၀တွင် ရေးသားခဲ့ကာ ပန်ကူးသည် ပထမဆုံးသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကောင်းကင်၊ ကမ္ဘာမြေကို ဖန်တီးသော ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ .
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သူရဲကောင်းအများအပြားသည် လူ့လောကကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့် ကူညီခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကို တားဆီးခြင်း၊ မီးအသုံးပြုမှုသင်ပေးခြင်း စသဖြင့်ဖြစ်၏။ ဒဏ္ဍာရီအစဉ်အဆက်သဘောမှာ ပင်ကိုအားဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်သဘောသွားသည့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ ဝေးကွာသည့် အချိန်ကာလများ၌ ချဲ့ထွင်၊ ဖြတ်တောက်မှုများရှိ၍ များစွာသောဝိရောဓိအနေထားများလည်းရှိသည်။ အစောဆုံး ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသူရဲကောင်းများကို ရံခါ၌ နတ်ဘုရားများအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီး ရံခါ၌ သူရဲကောင်းလူသားများအဖြစ်လည်းရှုမြင်ကြသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အစောဆုံး ထိုသူရဲကောင်းများတွင် Youchao (သစ်ဖြင့်အိမ်ဆောက်နည်းသင်ပေးသူ)၊ Suiren (မီးအသုံးပြုပုံနှင့် ချက်ပြုတ်နည်းသင်ပေးသူ) ပထမဆုံး ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သူရဲကောင်းအချို့မှာ ရာဇဝင်လာ ဧကရာဇ်များဖြစ်ကာ လူတစ်ပိုင်း မြွေနဂါးတစ်ပိုင်းပုံစံရှိသော နွီဝါး (Nuwa) နှင့် ဖူရှီး (Fuxi)တို့ လူ့ဘဝကိုခံယူမှုများပါဝင်သည်။ ဤနှစ်ဦးကို လူသားမိားအဖြစ် သရုပ်ဖော်မှုပိုများသည့် အနေအထားရှိ၍ ဟွမ်းတိ (Huangdi - အဝါရောင်ဧကရာဇ်) ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် နဂါးအဖြစ်သရုပ်ဖော်ကြသည်။
ရိုးရာအစဉ်လာ တရုတ်လူမျိုးတို့၏ အစောပိုင်း ဧကရာဇ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်ပြသဖော်ပြချက်တွင် ဘီစီ ၂၆၉၈ မှ ၂၅၉၉ထိ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းလွင်ပြင်၌ နေထိုင်ခဲ့သော အဝါရောင် ဧကရာဇ်မင်း ထို့နောက် မျိုးဆက် (၁၇)ဆက် စသဖြင့်ပါဝင်သည်။ ဒဏ္ဍာရီဆန်သောဖော်ပြချက်များ၌ မြှုပ်နှံထားသောအကြောင်းအရာ၏ သမိုင်းစစ်မှန်နိုင်ခြေရှိမှုကြား အဓိကကွာခြားချက်မှာဤသို့ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး မီးတောက်ဧကရာဇ် (Flame Emperor -Yandi) သက်တမ်းတစ်လျှောက် အချက်လက်များကို ကြိုးထုံး များသုံး၍ မှတ်တမ်းပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် စာရေးနည်းကို အဝါရောင်ဧကရာဇ်လက်ထက်ကစတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ယင်းအချိန်မှစတင်သည်ဟု ရေးသားထားသောရိုးရာအစဉ်လာများ၏ သမိုင်ဆိုင်ရာအချိတ်အဆက်မှန်ကန်မှုသည်ကား ကျွမ်းကျင်သူတို့၏ဆွေးနွေးရာ ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလများကို အနီးစပ်ဆုံးတွက်ချက်ခြင်းအား ရံဖန်ရံခါ၌ ဒဏ္ဍာရီ၌ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ နောက်တစ်ဦးသို့ အဆိုပြုထားသော မျိုးဆက်အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံ၍ ပြုကြသည်။ ထင်ရှားသောနမူနာတစ်ခုမှာ ကျိမိသားစုတည်ထောင်သူ ဟို့ကျိ (Hou Ji) ပင်ဖြစ်၍ ၎င်းမှဆင်းသက်လာသော မျိုးဆက်များသည် သမိုင်းဝင် ကျိုးမင်းဆက် (Zhou dynasty) ကို ဘီစီ ၁၀၄၆တွင် အုပ်စိုးခဲ့ကြသည်။
ဟို့ကျိသည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သူရဲကောင်းဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ပုံစံဖြစ်သည်။
ချိယိုသည် သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ကာ လက်နက်ကိရိယာများအပေါ် အလေးပေးသည်။
ရှေးအကျဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်သုံးပါး၊ ရှေးကျသောဧကရာဇ်ဘုရင်ငါးပါး၊ မင်းဆက်သုံးဆက်[ပြင်ဆင်ရန်]
လူတို့၏ ဒဏ္ဍာရီသမိုင်းအစသည် အုပ်စုနှစ်စုဖြင့်စတင်သည်။ (ဤ၌ အနည်းဆုံးသဘောအားဖြင့် တရုတ်ဟန်လူမျိုးများကို ဆိုလိုသည်) သုံးဦးတစ်အုပ်စု နှင့် ငါးဦးတစ်အုပ်စုတို့ဖြစ်သည်။ ပထမအုပ်စုသည် ရှေးအကျဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်သုံးပါးဖြစ်၍ ၎င်းတို့ပြီးနောက် ရှေးကျသောဧကရာဇ်ဘုရင်ငါးပါး ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မင်းဆက်သုံးခုလာ၏။ ရှမင်းဆက်၊ ရှန်းမင်းဆက် နှင့် ကျိုးမင်းဆက်တို့ဖြစ်သည်။ ဤမင်းဆက်သုံးဆက်မှာ သမိုင်းအရအမှန်ပင်ရှိသော်လည်း ထိုသမိုင်းမှ ဒဏ္ဍာရီကို သီးသန့်ခွဲထုတ်ရန်မှာ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် အလုပ်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယခုဖော်ပြထားသော ရှေးအကျဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်သုံးပါး၊ ရှေးကျသောဧကရာဇ်ဘုရင်ငါးပါး၊ မင်းဆက်သုံးဆက်ခေတ်များတွင် များစွာသောဒဏ္ဍာရီများ လွှမ်းခြုံလျက် ရှိသည်။
ရှေးအကျဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်သုံးပါး၏ ဘွဲ့မှာ ဟွမ်း ဖြစ်၏။
ထိုသုံးပါး၏အမည်များတွင် ယိုချောင် (Youchao - "အသိုက်ရှိသည်"), ဆွေ့ရန် (Suiren - "မီးပြုလုပ်သူ"), ဖူရှီး (Paoxi/Fuxi -"တိရစ္ဆာန်မွေးမြူသူ")နှင့် ရှန်းနွန် (Shennong - "စိုက်ပျိုးရေးနတ်") . တစ်ခါတစ်လေ၌ ဟွမ်းတိ ကိုထည့်သွင်းကြသည်။
ဤငါးပါး၏ ဘွဲ့မှာ တိ ဖြစ်၏။ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် သက်ဦးစံပိုင်ဘုရင် ၊ ဧကရာဇ် ၊ အရှင် ဟူ၍ပြမ်ဆိုမှုများရှိသည်။
ဤဧကရာဇ်ငါးပါး၏ အမည်များမှာ ဟွမ်းတိ၊ ရှောက်ဟောက်၊ ကျွမ်းရွှီ၊ တိခူ၊ ယောင်၊ ရွှမ် တို့ဖြစ်ကြ၏။
နွီဝါးနှင့် ဖူရှီးအား မွေတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းသတ္တဝါအဖြစ် သရုပ်ဖော်ထားပုံ
နွီဝါးနှင့် ဖူရှီးကို ရံဖန်ရံခါ၌ လူ့အမျိုးနွယ်၏ ရှေးအကျဆုံးဘိုးဘေးအဖြစ် ကိုးကွယ်ကန်တော့လေ့ရှိသည်။ မွေတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းသတ္တဝါအဖြစ် သရုပ်ဖော်ထားတတ်ကြသည်။ ဖူရှီးနှင့် နွီဝါးသည် မောင်နှမဖြစ်သကဲ့သို့ ဇနီးမောင်နှံလည်းဖြစ်သည်။
ကုန်းကုန် (Gong-Gong)သည် ကမ္ဘာနှင့် ကောင်းကင်ကြားရှိ ကမ္ဘာ့ထောက်တိုင်ကြီးများအားဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့နောက် ကောင်းကင်မှာ မီးများလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ရေများကြီးခြင်း၊ အခြားအဖျက်စွမ်းအားများဖြင့် တစ်စဆီစုတ်ပြတ်နေကာ နွီဝါးက ကောင်းကင်ကို အရောင်ပါသော ကျောက်တုံးကြီးငါးတုံးဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ စာပေ၌ နွီဝါးအကြောင်းဖော်ပြမှုသည် ဘီစီ ၃၅၀ထက်မစောခဲ့ပါ။ နွီဝါးက လူသားများကို ရွှံ့မြေမှ ပုံသွင်းဖန်ဆင်းခဲ့ကာ ကမ္ဘာကို လူဦးရေတိုးပွားစေခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ခေတ်သစ်လူများဖြစ်လာခဲ့၏။
မြစ်ဝါမြစ်မြေပုံကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုသည် ဒဏ္ဍာရီအားဖြင့် ဖူရှီးနှင့် သက်ဆိုင်၏။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် နောက်ပိုင်းခေတ်များ၌ ပြုလုပ်သည်ဟုလည်းဖော်ပြကြသည်။
ရှန်းနွန် (Shennong) ကို စိုက်ပျိုးရေးနတ် (အစွမ်းရှိသော လယ်သမား) ဟုဘာသာပြန်နိုင်ပြီး တရုတ်ရိုးရာဘာသာရေးတွင် ဒဏ္ဍာရီလာနတ်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ တရုတ်ရှေးဦးသမိုင်း၏ ဒဏ္ဍာရီလာသူတော်စင်အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် ကိုးကွယ်ပသကြသည်။ ၎င်း၏မျိုးဆက်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မီးတောက်ဧကရာဇ်များ (Flame Emperors) အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြ၏။
ဟွမ်းတိ၊ အဝါရောင်ဧကရာဇ် နှင့် လေ့ဆူ[ပြင်ဆင်ရန်]
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၌ နောက်ထပ်အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဟွမ်းတိ (Huang Di) ဖြစ်၍ တစ်ခါတစ်လေ အဝါရောင်ဧကရာဇ် (Yellow Emperor) အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ တိ စကားလုံးသည် မြေကြီး၊ မြေဆီဩဇာ အနက်ဖြစ်ကာ မြစ်ဝါမြစ်ဝှမ်းမှ အဝါရောင်မြေကြီး/ဆီ ကို အစွဲပြု၍ပေးထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တိ ကို ဧကရာဇ် ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ယူ၍ ဟွမ်းတိ ကို အာဏာပိုင်သောအမည်နာမအဖြစ် နှောင်းလူတို့က ပြောင်းခဲ့ကြသည်။ အခြားအရောင်များယူ၍ နာမည်ပေးထားသော မင်းများလည်းရှိရာ အနက်၊အစိမ်း၊ အနီ၊ အဖြူ စသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီတစ်ချို့အရ ဟွမ်းတိသည် Shaodian ၏သားဖြစ်၍ Shaodian သည် ယန်တိ(Yan Di) ၏ ဝမ်းကွဲညီအကိုတော်သည်။ မိခင်မှာ Fubao ဟုဆိုကြပြီး ဇနီးသည်မှာ လေ့ဆူ(Leizu) ဖြစ်ကာ ပိုး၊ ပိုးချည်ထုတ်လုပ်မှုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ အချို့ ချန့်ကျီ(Cangjie) မူများတွင် စာရေးနည်းအတတ်ပညာသည် ဟွမ်းတိလက်ထက်၌ စတင်သည်ဟုဆိုသည်။
တိခူ (Di Ku) သည်ဒဏ္ဍာရီလာအရေးပါသောသူတစ်ဦးဖြစ် ၎င်း၏ဘွဲ့ တိ (帝) က ဖော်ပြထားသည်။ တိခူသည် ဟွမ်းတိမှဆင်းသက်လာကာ ဘီစီမတိုင်ခင် ဒုတိယထောင်စုနှစ်၏ ရှမင်းဆက် တော်ဝင်မင်းမျိုးတို့၏ ဘိုးဘေးဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ တိခူသည် ဂီတတူရိယာအမျိုးမျိုးကို တီထွင်သဖြင့် ချီးကျူးမှုခံရသည်။ ၎င်းသည် နတ်လူအမျိုးသမီးများဖြစ်သော ကျန်းယွမ် (Jiang Yuan) နှင့် ကျန်တိ (Jiandi) တို့နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
ယောင် နှင့် ရွှမ်[ပြင်ဆင်ရန်]
ယောင် နှင့် ရွှမ်တို့သည် အရေးပါသော ဒဏ္ဍာရီလာမင်းများဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရာတွင် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြ၏။ ယောင် အုပ်စိုးစဉ်ကာလ၌ ကြီးမားသည့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီး ရွှမ်း လက်ထက်အထိဖြစ်သည်။ ရွှမ်းသည် ယောင်၏ ဆက်ခံသူဖြစ်သည်။ သမိုင်းအရ ချင်ရှီဟွမ် (ရှီဟွမ်တီ) သည်တရုတ်ပြည်ကို ဘီစီ (၂၂၁)၌ စုစည်းတည်ထောင်ပြီး ၎င်းအရင်အုပ်ချုပ်သူများထက် ၎င်း၏အောင်မြင်မှုများသည်သာလွန်ကြောင်း ဝါဒဖြန့်ခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းဘွဲ့ ဟွမ်း (皇) နှင့် တိ (帝) ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ဟွမ်းတိ ဆိုသောဘွဲ့အသစ်ခံယူသည်။ ဤသို့ဖြင့် ချင်ဧကရာဇ်သည် ကမ္ဘာ့ကြီးတစ်ခုလုံးတွင် အကြွင်းမဲ့တရားဝင်ဧကရာဇ်ဖြစ်စေရန် ၎င်း၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများကို ဒဏ္ဍာရီကိုအသုံးချ၍ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကွမ်း၊ ယွီနှင့် ရေကြီးမှုကြီး[ပြင်ဆင်ရန်]
ရွှမ်းသည် ၎င်း၏အရိုက်အရာကို ယွီ ဧကရာဇ်အားလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့သည်။ ရေကြီးမှုဖြစ်လေ့ရှိသော မြစ်ဝါမြစ်သည် ယောင်လက်ထက်တွင် ရေလွှမ်းမိုးခဲ့၍ စိုက်ပျိုးမြေများလည်း ရေအောက်ရောက်ရှိပြီး အမဲလိုက်မှုများလည်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည့်အတွက် လူမှုအသိုက်အဝန်းကို ဖျက်ဆီး၊ လူ့ဘဝများကို အန္တရာယ်ပြုခဲ့သည်။ လူတို့သည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူထပ်သောဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။ ယွီ၏ ဖခင် ကွမ်းကို ယောင်က ရေကြီးမှုများကို စီမံရန် တာဝန်ပေးခဲ့သော်လည်း ကိုးနှစ်ကြာသည်အထိ ပြဿနာကိုပြေလျော့စေရန် ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့အတွက် ကွမ်းကို ဧကရာဇ်ယောင်အမိန့်ဖြင့် အမတ် ကျူးရုံ (Zhurong)က ကွပ်မြက်ခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ မူကွဲအချို့လည်းရှိသည်။ ဒဏ္ဍာရီပိုဆန်သော မူကွဲများ၌ ကွမ်းသည် တိရစ္ဆာန်အသွင်ပြောင်း၍ မိုးကောင်းကင်၏ အမျက်ဒေါသမှ ရှောင်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ( အကြောင်းမှာ ကွမ်း ကောင်းကင်သို့သွားရောက်ကာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မည့် ကမ္ဘာမြေနေရာအကျယ်အဝန်းချဲ့ထွင်သည့် မှော်ပစ္စည်းတစ်မျိုး ရှီးရန် (Xirang) ကိုခိုးယူခဲ့သည့်အတွက် မီးနတ်ဘုရား ကျူးရုံ က မိုးကြိုးဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။) သုံးနှစ်ကြာသော် ယွီသည် ကွမ်း၏ဝမ်းဗိုက်မှ ထူးဆန်းသောသတ္တဝါတစ်မျိုးအနေဖြင့် ထွက်ရှိလာသည်။ ဖခင်အရိုက်ရာဆက်ခံပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုကို တိုက်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရှီးရန် အကူအညီဖြင့် လူအများကို တူးမြောင်းများ၊ တမံဘောင်များပြုလုပ်စေသည်။ ဆယ်သုံးနှစ် ပင်ပန်းစွာပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက် ရေလွှမ်းမှုကို လျှော့နည်းစေခဲ့သည်။ ရေကြီးမှုကိုထိန်ချုပ်ခြင်းနှင့်အတူ လူအများအားကယ်ဆယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၌ ယွီနှင့် အပေါင်းအပါတို့၏ ဒဏ္ဍာရီကို အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့် ဤသို့ရှုမြင်နိုင်ပါ၏။ ထိုလုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းသည် ရေလွှမ်းမိုးမှု ဒဏ္ဍာရီအချိန်အတောအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အမဲလိုက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေတွင်းရေကန်တူးခြင်း၊ နတ်က္ခဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးစုစုစည်းစည်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတီထွင်မှုများကဲ့သို့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆက်ဆံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကို ပြယုတ်အနေဖြင့် ရှုမြင်နိုင်သည်။
ပထမဆုံး မင်းဆက်သုံးဆက်သည် ဒဏ္ဍာရီ၌ အထူးတလည် အရေးပါအရာရောက်ကြသည်။
ရှမင်းဆက်သည် (Xia dynasty) ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် စာပေဖော်ပြချက်များမှတစ်ဆင့် အမှန်တကယ်တည်ရှိခဲ့သော မင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုဖော်ပြချက်များ၌ ဒဏ္ဍာရီဆန်မှုတစ်ဝက်လောက်ပါဝင်နေပြီး အချို့မူများတွင် လုံးဝဥသုံဒဏ္ဍာရီ၊ စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာများပါရှိသည်။ ရေလွှမ်းမိုးကို အဓိကဖြိုခွင်းသူ ယွီသည် ဧကရာဇ် ယောင် နှင့် ရွှမ်း အားခစားခဲ့သောကြောင့် ရှဒေသကိုပေးကာ ရှမင်းသား (Prince of Xia) အရာချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။  ယွီသေဆုံးပြီး ၎င်း၏ဆက်ခံသူနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများလည်းရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏သား ချီ (ခိုင် - Kai ဟုလည်းသိရှိကြ၏) သည် ထိုလုပ်ငန်း၌ ဒုတိယအကြီးအကဲနေရာယူ၍ လုပ်ကိုင်ရာ စိုက်ပျိုးမရသည့်အခြေနေဆိုး၌ လူများကို အစာဝလင်စေရန်ကူညီခဲ့သည်။ ချီ နန်းတက်မှုသည် ရှေးကရှိခဲ့သောထုံးစံဖြစ်သည့် အကျိုးများများဆောင်သူ နန်းတက်စနစ်ကို ချိုးဖောက်၍ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နန်းတက်စနစ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ရာ နောင်နန်းဆက်တို့၏ ရိုးရာအစဉ်လာဖြစ်ခဲ့သည်။. ဤသို့ဖြင့် ယွီ၏ အဓိကအာဏာပိုင်ပြီးနောက် နန်းဆက်အသစ်ကို ရှမင်းဆက် ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။
ရှမင်းဆက်သည် အတွေးအခေါ်နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များနှင့် နီးစပ်မှုမရှိကွာဝေးလှသည်။ ရှန်းမင်းဆက်တည်ထောင်သူ ချီ (Qi) (ရှန်းမင်းဆက်၏ ရှီး Xie ဟုလည်းသိရှကြ၏) သည် ထူးဆန်းစွာမွေးဖွားလာခဲ့၍ မိခင် Jiandi ကိုယ်ဝင်ဆောင်ရခြင်းမှာ ငှက်ဥတစ်လုံးငို မျိုချ (သို့) ထွေးပိုက်ထားသောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ချီမှဆင်းသက်သူ ထန်(Tang) သည် ကျဲ (Jie) ကိုဖြုတ်ချ၍ ရှန်းဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ ကျဲမှာ ရှမင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်၍ မူးရစ်ရက်စက်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ရှန်းမင်းဆက်၏ အဆုံးသတ်ကို ဖော်ပြပါရှိသော ဒဏ္ဍာရီလာအဖြစ်ပျက်များနှင့် ကျိုးမင်းဆက်တည်ထောင်ခြင်းများအကြောင်းကို မိုဆီး (Mozi)က ၎င်း၏ ပဉ္စမမြောက်စာအုပ်တွင် ဤသို့ရေးသာထားသည်။
ရှမင်း ကျဲ အုပ်ချုပ်စဉ် ရာသီကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကျရောက်၏။ ရာဇဝင်ပုံပြင်များကဆိုသည်မှာ နေနှင့် လ လမ်းကြောင်းများပြောင်း၍ ရာသီဥတုများလည်း ရှုပ်ထွေးပွေလီကုန်၏။ သီးနှံကြီးငါးခု ခြောက်ခမ်းသွားသည်။ သရဲတစေများငိုကြွေးကုန်ကာ ကြိုးကြာများဆယ်ညတိုင်တိုင် အော်မြည်ကြသည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ထန် ကို ရှမင်းဆက်၏ တာဝန်ကို ယူစေ၏။ ကောင်းကင်ဘုံ၏ အကူအညီဖြင့် ရှ ကို ဖျက်ဆီးစေပြီး ထန်မှာ ရှန်းထန်အမည်တွင်သည်။
ရှမင်းဆက်ပြီးနောက် ရှန်းမင်းဆက်တက်သည်။ မိုဆီးက ရှန်းမင်းဆက်အဆုံးနှင့် ကျိုးမင်းဆက်အစကို ဖော်ပြထားသေးသည်။
ရှန်းကျိုးအုပ်ချုပ်စဉ် ကောင်းကင်ဘုံမှာ ကျိုး၏ အကျင့်စရိုက်နှင့် အချိန်မှန်မှန်ပူဇော်ပသခြင်းမပြုသဖြင့် သည်းမခံသဖြင့် ရွှံ့မိုးကြီးများ ဆယ်ရက်ဆယ်ညတိုင်တိုင်ရွာစေသည်။ ချောက်ကြီး ကိုးခု နေရာပြောင်းသွား၏။ သဘာဝမဟုတ်သည့် ထူးဆန်းသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာသည်။ သရဲတစေများ အော်ဟစ်မြည်တမ်းကြသည်။ အသားများနှင့် ဆူးမိုးများရွာသဖြင့် အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားအဖြစ်ပြောင်းကုန်ကြသည်။ ငှက်နီတစ်ကောင်မှ " ကောင်းကင်ဘုံက ဝမ် ကိုအမိန့်ထုတ်သည်မှာ ယင် ကိုအပြစ်ပေး၍ အင်ပါယာကို သိမ်းပိုက်ပါ" ဟူသောသတင်းစကားဆောင်လာခဲ့သည်။ ဝမ်၏သား ဝူ ဘုရင်ဖြစ်သောအခါ နတ်သုံးပါး အိပ်မက်၌ပေါ်လာ၍ ရှန်းကျိုးဘုရင်ကို အရက်၌နှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဝူက ၎င်းကိုတိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အောင်မြင်သောအခါ ကောင်းကင်ဘုံက အဝါရောင်ငှက်သင်္ကေတ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ကျိုးမင်းဆက် (Zhōu dynasty) ကိုတည်ထောင်သူမိသားစု၏ ဇာစ်မြစ်သည် ကျိမိသားစုဖြစ်၏။ ဒဏ္ဍာရီအခြင်းအရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျိမိသားစုသည် ဟို့ကျိ မှစတင်ခဲ့သည်။ ဟို့ကျိနှင့် ပတ်သက်သောဒဏ္ဍာရီမှာ နှစ်ခုကွဲလျက် ရှိသည်။ ရှန်းမင်းဆက်အဆုံးနှင့် ကျိုးမင်းဆက်အစသည် အချိန်ပိုင်းအားဖြင့် ထပ်နေရာ တူညီနေသောအကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။
ကျိုးမင်းဆက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏ အမွေအနှစ်တစ်ခုမှာ အနာဂတ်ဆိုင်ရာဟောပြောခြင်း ဂန္ထဝင်စာအုပ် (I Ching) ဖြစ်သည်။ ရှစ်ထောင့်သဏ္ဌာန်ရှိသော ပါကွား သည် ဝမ်ကုန်းထက်စောသော ခေတ်တစ်ခုမှဖြစ်ရမည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်၏ တည်းဖြတ်မှတ်ချက်ရေးခြင်းထက်လည်းပိုနိုင်သည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်ကို ဒဏ္ဍာရီက ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သူရဲကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ရံခါ၌ ဖူရှီး အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သည်။(; 
ကျိုးမင်းဆက်ကို ဆက်ခံသော မင်းဆက်များသည် မှတ်သားထိုက်သော ဒဏ္ဍာရီလာအကြောင်းအရာများပါရှိသည်။ ဟန်မင်းဆက် နှင့် သုံးပြည်ထောင်ခေတ် ကြားကာလ၌ ဒဏ္ဍာရီများစုစည်းမှုရှိခဲ့ကာ ထိုအချက်များသည် သုံးပြည်ထောင်ခေတ်ဇာတ်လမ်းများဝတ္ထု ၌ (Romance of the Three Kingdoms) ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထန်မင်းဆက်မှစ၍ ဘုန်းတော်ကြီး ရွှမ်ကျန်း၏ ဗုဒ္ဓပိဋိကတ်တော်များကို အနောက်ဘက်(အနည်းနှင့်အများဆိုသလိုအိန္ဒိယဖြစ်နိုင်) မှသွားရောက်ယူသည့် ရာဇဝင်ပုံပြင်များဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရာ မင်မင်းဆက်တွင် အနောက်သို့ခရီးသွားခြင်း (Journey to the West) ဝတ္ထုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
အရေးပါသော နတ်များနှင့် ဒဏ္ဍာရီလာ ပုဂ္ဂိုလ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝမ်ချန်း၏ ဆင်စွယ်၌ထွင်းထုထားသော တရုတ်နတ်ဘုရား၊ မင်မင်းဆက် (၁၅၅၀-၁၆၄၄)
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီနှင့် ရိုးရာဘာသာရေးတွင် အရေးပါသော နတ်များ၊ ဝိဉာည်များ၊ ဒဏ္ဍာရီလာပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိသည်။ ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် (Jade Emperor) ကဲ့သို့သောသူတစ်ချို့၌ တန်ခိုးအစွမ်းရှိသည်( ရံခါ၌ ဆိုကြသည်မှာ ထိုသူသည်လည်း လူသားအဖြစ် ဘဝပြန်လည်စတင်သည်)။ သိူ့သော်လည်း တရုတ်ဘာသာစကားတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကို ရှန် (shen) ဟုရည်ညွှန်း၍ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွငါ ကျုံးကော်ရှန်ဟွ (中國神話 Zhōngguó Shénhuà)ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ရှန် သည် ဝိဉာည်၊ နတ် သို့ နတ်သမီး၊ သရဲတစေ (သို့) အခြားအဓိပ္ပာယ်များလည်းရှိသည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအယူအဆမှာ မသေမျိုးများကို (immortals) အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည် ရှန်း (Xian - ရျှန်း) ။ ထိုမသေနိုင်သောသူများဆိုရာ၌ အလွန်အမင်းရှည်ကြာသောသက်တမ်းရှိသူများ (သို့) ထာဝရသက်တမ်းရှိသူများလည်းဖြစ်နိုင်ကြသည်။ တောက်ဝါဒီများ၊ နတ်ဆရာများနှင့် အခြားသူများသည် မှန်ကန်သောအားထုတ်မှုနှင့် အခြားများစွာသောအကျင့်များမှတစ်ဆင့်သာ ဤသို့သောအရည်အချင်းကိုရရှိနိုင်ကြသည်။ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဒဏ္ဍာရီတွင် မသေနိုင်သောအခြားဥပမာတစ်ခုမှာ လိုဟန့် (lohans - အရဟတ် - ရဟန္တာ)၊ ဗောဓိသတ္တများ (Bodhisattva - ဘုရားလောင်း) နှင့် ဗုဒ္ဓ(များ) တို့ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာပုံစံနှင့် တောက်ဝါဒ/ဘာသာ ပုံစံ (တာအို) များအကြား ရှင်းလင်းကွဲပြားမှုမရှိသည့် အနေအထားရှိကာ တောက်ဝါဒနှင့် ရိုးရာဘာသာကြား၌လည်း သိသာရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ အခြားသောဒဏ္ဍာရီလာပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်နိုင်ငံသို့စတင်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်စဉ်မှ ယူငင်ထားကြသည်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် အဓိကကျသောနတ်အယူအဆမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
ရှန်းတိ (Shangdi) သို့ ဟွမ်းထျန်းတတိ (皇天大帝) သည်ရှန်းမင်းဆက် အစောပိုင်းကပင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းခေတ်များ၌ ဟွမ်းထျန်းရှန့်တိ (皇天上帝) ဟုရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ ဟွမ်းထျန်းတတိ သည် ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် နှင့် ထျန်းဟုခေါ်သော ကောင်းကင်ဘုံကို ညွှန်းဆိုနိုင်သည်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၌ ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် သည် ကောင်းကင်ဘုံ၊ ငရဲဘုံ နှင့် လူ့ဘုံကို ပိုင်းစိုးသည်ဟု ဆိုသည်။ ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် ကောင်းသူစံ မကောင်းသူခံ စနစ်အရ (merit system) သေပြီးသောသူများ၊ ရှင်သောသူများနှင့် သူတော်စင်များကို ဆုလဒ်များ၊ ကုစားပေးမှုများ ပေးသည်။ အမှုကိစ္စများကို ဆုံးဖြတ်၏။ အဆိုပြုထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူတော်စင်များကကန့်ကွက်သည့်အခါ အုပ်ချုက်ဆုံးဖြတ်မှုသည် ဝါရင့်အကြံပေးသူများအဖွဲ့သို့ ရောက်ရှိဆုံးဖြတ်စေသည်။ တောက်ဝါဒ တရုတ်ပြည်၌တည်ထောင်အပြီးတွင် စာပေများ၌ ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် ပါဝင်မှုရှိသည်။ ၎င်း၏ပါဝင်မှုသည် အဝါရောင်ဧကရာဇ်၊ နွီဝါး၊ ဖူရှီး တို့မတိုင်ခင်ခေတ်များအထိ ယွိဟွမ်း (Yu Huang )အမည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။
ထျန်း (Tian) သည် ဤအမည်ဖြင့် ကောင်ကင်နတ်ဘုရားတစ်ပါး (သို့) ကောင်းကင်ဘုံ ဖြစ်သည်။ ထျန်းသည် ဘီစီ (၇၀၀)ခန့်တွင် စာပေ၌ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကာ ရှူကျင် (Shujing - Book of Documents) စာအုပ်နေ့စွဲအရ ထိုအချိန်ထက်လည်းစောနိုင်သည်။ ထျန်း အတွက် အသားပေးဖန်တီးထားသောဇာတ်လမ်းများ မရှိပါ။ ထျန်း နှင့် ရှန်းတိ (Shangdi) တို့၏ အရည်အသွေးများသည် နောက်ပိုင်းစာပေများ၌ ပေါင်းစပ်သွားကြပြီး ယခုအခါတွင် ဟွမ်းထျန်း ရှန်းတိ ("皇天上帝", Huángtiān Shàngdì) ဟူသော ပုဂ္ဂိလ်တစ်ပါးအဖြစ် ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသည်။ ဥပမာဆိုရသော် ဘေဂျင်းမြို့၏ ကောင်းကင်ဘုံဘုရားကျောင်းတွင်ဖြစ်သည်။
တောက်ဝါဒ (တာအို) နှင့် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ[ပြင်ဆင်ရန်]
တဖြည်းဖြည်းချင်း ရိုးရာဘာသာရေးနှင့် ရိုးရာယုံကြည်မှုများ၏ အချို့သောအသွင်သဏ္ဌာန်များ စုစည်းပေါင်းစပ်သွားကြပြီး တောက်ဝါဒ/ဘာသာ (တာအိုဘာသာ) (Daoism) ဟုအသိများသော ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ၊ ကျင့်စဉ်များ၊ ဒဿနပိုင်းများပါဝင်သည့် အုပ်စုတစ်ခုထဲသို့ ပြုပြင်ဝင်ရောက်လာကြသည်။ တောက်ဝါဒကို အဓိကတည်ထောင်သူတစ်ဦးမှာ လောင်ဇီ ဖြစ်၍ ရာဇဝင်များ (သို့) ဒဏ္ဍာရီများ၌ပါဝင်သည်။ ဘာသာတရားနှင့် ဒဏ္ဍာရီများသည် တူညီမှုများစွာရှိ၍ တရုတ်ရိုးရာဘာသာနှင့် တောက်ဝါဒတို့သည်လည်း နယ်ပယ်တူညီမှုများရှိကြသည်။
ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ် ယွီဟွမ်း တွင် ရှည်လျှား၊ ပါဝင်မှုများသော ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးအားလူသားတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချစေခြင်းငှာ မိစ္ဆာများကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဆယ့်နှစ်နှစ်တာပြက္ခဒိန်ကို ကိုယ်စားပြုသော တိရစ္ဆာန်များ၏ မျိုးနွယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကမ္ဘာမြေနှင့် ငရဲဘုံအတွက် ကိစ္စများမြောင်ကို အထက်ကောင်းကင်ဘုံမှ ယေဘုယျသဘော လည်ပတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဒဏ္ဍာရီ၌ပါဝင်မှုများသဖြင့်လည်း ယွီဟွမ်းကို ခေတ်သစ်တောက်ဝါဒ၌ အဓိကနတ်ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြသည်။
မသေသူ ရှစ်ပါးသည် ဒဏ္ဍာရီ၌သော်လည်းကောင်း တောက်ဘာသာရေး၌သော်လည်းကောင်း ပါဝင်တည်ရှိကြသည်။ စာပေနှင့် အနုပညာ(ပန်းချီ)၌လည်းပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ He Xian'gu၊ Cao Guojiu၊ Li Tieguai၊ Lan Caihe၊ Lü Dongbin၊ Han Xiangzi၊ Zhang Guolao နှင့် Han Zhongli (Zhongli Quan ဟုလည်းသိကြ၏) တို့ဖြစ်ကြသည်။ စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ တစ်ဦးခြင်းဖြစ်စေ ဤရှစ်ပါးသည် မြေလျှိုးမိုးပျံအစွမ်းများရှိသည်။ ဒဏ္ဍာရီအများအပြား၌ စုပေါင်း၍ ပါဝင်ကြသည်။
အဝလောကီတေသွာရ (ကွမ်ရင်)ချုံပင်သစ်တစ်မျိုးဖြင့် ထုထားသောရုပ်တု
ပထမရာစုနှစ်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် တရုတ်ပြည်သို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ကာ ရှစ်တိဂါဘ (သက္ကတ- Kṣitigarbha ၊ တရုတ် - Dizang တိဆန်းဖိုးဇာ)၊ ကောင်ကင်ဘုံ၏ မင်းလေးပါး (သို့) စတုလောကနတ်လေးပါး၊ သကျမုနိဗုဒ္ဓ (釋迦牟尼佛, Shìjiāmóunífó) ၊ အဝလောကီတေသွာရ (ကွမ်ရင်အဖြစ် သရုပ်ဖော်ကြပြီး ဂရုဏာရှင် ဗောဓိသတ္တဘုရားလောင်းဖြစ်သည်)၊ ဟိုတိုင်း (အန်ကုံးကိုယ်တော် Laughing Buddha) ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နတ်များ၊ တန်ခိုးရှင်များနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ကူးများစွာလည်းပါဝင်လာခဲ့သည်။ ထန်မင်းဆက် အာဏာစက်ကျယ်ပြန့်လာမှုနှင့်အတူ တရုတ်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရာသစ်များ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ယင်းထန်မင်းဆက်၌ ရွှန်ကျန်းကိုယ်တော်သည် အိန္ဒိယမှ ကျမ်းစာ (၆၀၀)ကျော်ကို တရုတ်ပြည်သို့သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ကွမ်ရင်သည်လည်း တရုတ်တောက်ဘာသာ၌ နတ်တစ်ပါးဖြစ်လာကာ ဒဏ္ဍာရီများစွာ၌ပါသော အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကွမ်ရင်မယ်တော်ဟု အသိများသော ကွမ်ရင် (Guanyin) သည် ဂရုဏာရှင်နတ်ဘုရားမတစ်ဦးဖြစ်၍ အခြားအမည်များစွာလည်းရှိသည်။ ကွမ်ရင်နှင့်ပတ်သက်သော ဒဏ္ဍာရီသည်နှစ်မျိုးရှိ၍ တစ်ခုမှာ အိန္ဒိယ၏ အဝလောကိတေသွာရ(Avalokiteśvara) အပေါ်အခြေခံပြီး နောက်တစ်ခုမှာ မြောင်ရှန်းရာဇဝင်(legend of Miaoshan) လာ တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းကိုအခြေခံထားသည်။
ရှစ်တိဂါဘသည် အိန္ဒိယ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာနတ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး တရုတ်တွင် တိဆန်း (Dizang) ဟုအမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သည်။ ၎င်းကို ရောင်ခြည်ကွန့်မြူနေသော ရဟန်းအသွင်ဖြင့် သရုပ်ဖော်တတ်ကြသည်။ ငရဲဘုံကို အားဖြင့်ဖွင်ရန် တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းလည်းကိုင်ထားသည်။ ထို့နောက် လိုတရ ရတနာတစ်ခုကိုလည်း အမှောင်ခွင်း အလင်းပေါ်စေရန် ကိုင်ထားသည်။
စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် ထောင့်လေးထောင့်၏ တစ်ထောင့်စီ၌ရှိသည့် အုပ်စုအဖြစ်သိရှိကြသည်။ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းများ၌ ဤနတ်မင်းကြီးလေးပါးကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဝဖိုင့်၍ ရယ်သွေးနေသော ဗုဒ္ဓ(ရဟန်း)တစ်ပါးအဖြစ် သရုပ်ဖော်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်၌ ဖြစ်ထွန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် အဓိကအချက်တစ်ခုမှာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာမှုဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၊ ပညာသင်ကြားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကွန်ဖြူးရှပ်သည် ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉ တွင်နေထိုင်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်၍ ရှေးဘိုးဘေးတို့၏ရိုးရာထုံးစံကို မြတ်နိုးကြည်ညိုသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တောက်ဝါဒတွင် အဓိကကိုးကွယ်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရိုးရာဘာသာရေးနှင့် ဒဏ္ဍာရီတို့ကြား မျှဝေသုံးစွဲခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘေဂျင်းမြို့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ တွေ့မြင်ရသောရ ကွမ်းတိနတ်စင်
ခေတ်သစ်နှင့် ခေတ်ဟောင်းတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် ဘာသာရေးအတွက်သာမက ဒဏ္ဍာရီအတွက်ပါ နေရာများစွာရှိသည်။ အချို့သောနတ်ဒေဝါများသည် အထူးပူဇော်မှုရရှိကာ ထိုနတ်ဘုရားတို့မှာ ဥစ္စာဓနပေါကြွယ်စေခြင်း၊ အသက်ရှည်စေခြင်း၊ သားသမီးထွန်းကားစေခြင်း တို့နှင့်ပတ်သက်သည်။ ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သော ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများလုပ်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် များစွာသောဆန္ဒများကို ဒဏ္ဍာရီသဘောမျိုးဖြင့် ရယူရန် ဖြစ်နိုင်ကြသည်။ ဥပမာ တရုတ်ပြည်ရှိ စတိုးဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌နေထိုင်ကြသော တရုတ်လူမျိုးများတွင် ကွမ်းတိ(Guandi) ခေါ် ကွမ်းရီ (ကွမ်းယွီ) ၏ နတ်စင်များရှိတတ်ကြသည်။
သုံးပြည်ထောင်ခေတ် စစ်သူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော ကွမ်းရီ(ကွမ်းယွီ) သည် နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ ကွမ်းတိနတ်အဖြစ် တရားဝင်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ညီအကိုစိတ်ဓာတ်နှင့် စီပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သောနတ်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်လေ၌ သိုင်းပညာ၊ စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရှုမြင်ကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီအရ မက်မွန်ခြံတွင် လျှိုပေ့၊ ကျန်းဖေးတို့နှင့် သွေးသောက်ညီအကိုဖွဲ့ခဲ့သည်။
အသက်ရှည်ခြင်း ကြယ်နတ်ဘုရား၊ (၁၆)ရာစု မင်မင်းဆက်၊ စဉ့်သုတ်ပန်းတမော့လက်ရာ
ရိုးရာဘာသာတရားနှင့် ဒဏ္ဍာရီတို့ကြားမျှဝေလက်ခံသုံးစွဲထားသည့် နမူနာတစ်ခုမှာ ဤနတ်ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။
လူများသေလွန်ပြီးလျှင် ဖြစ်ပေါ်မည့်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီများစွာသည် တမလွန်ဘဝနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်ကြသည်။ ဘိုးဘေးကန်တော့ခြင်း၊ ဒဏ္ဍာရီသဘော နတ်ဘုံနှင့် ငရဲဘုံတို့၏ တည်နေရာ၊ မိသားစုဝင်အုတ်ဂူများ၌ပြုလုပ်ကြသော ရိုးရာဓလေ့များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ရံခါတွင် ဒဏ္ဍာရီ၌ အချို့လူများသည် သေခြင်းတရားကိုရှောင်ရှား၍ အသက်မသေနိုင်သော တန်ခိုးစွမ်းအားရှိသူ (တာအိုဝေါဟာရအားဖြင့် ရှန် (xiān))များဖြစ်လာကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအရည်အသွေးများသည် တရုတ်ဂရိတ်ပညာများကျင့်ကြံသဖြင့် ရလာသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ မသေဆေး (Elixir of life) ရခြင်းနှင့် အစားအသောက်ပုံစံတစ်ချို့၊ မေထုံမှီဝဲခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်သည်။ ထိုမသေနိုင်သော တန်ခိုးရှင်များသည် ဒဏ္ဍာရီအားဖြင့် သုခတောင်ကြီးဟုခေါ်တွင်သည့် ခွန်းလွန် တောင်ကြီး၌နေထိုင်ကြ၏။
အသက်ရှည်ခြင်းဆိုင်ရာနတ်သမီး မာကူးပုံပါသော ပန်းကန်။ ချင်းမင်းဆက်၊ ကျန်ရှီးခရိုင်၊ ကျင့်တချန် (အေဒီ ၁၇၀၀-၁၈၀၀)၊ ကြွေသုတ်၍ အပေါ်မှ ဆေးရောင်စုံဖြင့်ဆွဲထားခြင်း။
မာကူး (Magu) သည်ဒဏ္ဍာရီလာ တောက်ဝါဒီတန်ခိုးရှင်တစ်ဦးဖြစ်၍ ယခုတွင် ကိုးကွယ်ကြသည်။ မသေဆေးနှင့် ဆက်နွယ်သောသူဖြစ်ကာ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် အမျိုးသမီးများကိုကာကွယ်သူအဖြစ် အမှတ်သညာပြုကြ၏။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၌ သရဲတစေ ဝိဉာဉ်များနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆ၊ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များစွာရှိသည်။
ဘာသာရေးအားလပ်ရက်နှင့် ရိုးရာပွဲတော်များသည် ဒဏ္ဍာရီများစွာနှင့်သက်ဆိုင်ကြ၏။
ချင်းမင်းပွဲတော်သည် တရုတ်အားလပ်ရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်၍ မိသားစုဝင်များလုပ်ဆောင်သည့်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကာ ဘိုးဘေးများကိုကန်တော့ကြသည်။ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော ချီးရှီးအားလပ်ရက်တစ်ခုသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သက်ဆိုင်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်၏။ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်မှာ နွားကျောင်းသားနှင့် ရက်ကန်းသမလေး တို့ပြန်လည်ပေါင်းထုပ်သည့် ဒဏ္ဍာရီလာပုံပြင်ကိုအစွဲပြု၍ လုပ်ကြသည်။
မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အစရှိသော ရာသီနှင့်သက်ဆိုင်သော နတ်ဒေဝါများစွာရှိကြသည်။ နဂါးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ကြသည်။ နုပါ (Nuba) သည် အဝါရောင်ဧကရာဇ်၏ သမီးတော်ဖြစ်၍ ကျိုးလုတိုက်ပွဲတွင် ဖခင်ကို ချိယိုနှင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲ၌ကူညီခဲ့သည်။ ချိယိုသည် လေနတ် ဖန်းပို (Feng Bo)နှင့် မိုးနတ် ယွိရှီ (Yu Shi) ကိုစေလွှတ်ပြီးနောက် နုပါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းလာပြီး မိုးခေါင်မှုအစွမ်းသုံး၍ ထိုနတ်နှစ်ပါး၏ အစွမ်းများကို ချေဖျက်ခဲ့သည်။ တရုတ်စာပေ၌ ပထမဆုံးပါဝင်သောနတ်သမီးများအနက်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ရှိကျင်းကဗျာစုစည်းမှု၊ နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာသော ရှန်ဟိုင်ကျင်း စသည်တို့၌ပါဝင်သည်။
များမြောင်လှသော နတ်၊ နတ်သမီး စသည်တို့သည် တစ်ချို့သော နတ်က္ခတာယာဂြိုဟ်များနှင့် အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ကြသည်။
နေနတ်ဘုရားမတစ်ပါးမှာ ရှီးဟော် (Xihe)ဖြစ်သည်။
ဟို့ရီ နှင့် နေဆယ်စင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
နေဆယ်စင်းရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ တစ်စင်းဆီသည် တာဝန်ကျရာနေ့၌ ကောင်းကင်ကိုဖြတ်သန်းရသည်။ (တစ်ချိန်က တစ်ပတ်တွင် ဆယ်ရက်သတ်မှတ်ထားသည်ဟု တွေးယူဆဖွယ်ရာရှိ၏။) တစ်ရက်သောနံနက်ခင်းတစ်ခု၌ ထိုနေဆယ်စင်းလုံးထွက်လာကာ အပူရှိန်ကြီးသဖြင့် မြေပြင်ခန်းခြောက်၊ သစ်ပင်များညှိုးနွမ်း၊ လူအများသေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်လာသည်။ မြားသမား ဟို့ရီ(Houyi) သည် နေကိုးစင်းကို ပစ်ခတ်ခဲ့၍ လူအသက်ကိုကယ်ဆယ်သည်ဟု ဒဏ္ဍာရီရှိသည်။
လနတ်သမီး၊ ခြေသုံးချောင်းပါဖားနှင့် ငရုတ်ဆုံကျည်ပွေ့ဖြင့် ယုန် (ထန်မင်းဆက်ခေတ်က ကြေးမုံအနောက်ဘက်)
ချန်းဟော(Chang'e) သည် လနတ်သမီးဖြစ်သည်။
ဒဏ္ဍာရီ၌ လနတ်သမီး ချန်းဟောသည် မြားသမား Houyiနှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ရက်၌ မသေဆေးလုံးတစ်လုံးမျိုချမိ၍ လဆီသို့တက်သွားသည်။ ကောက်ရာသီအချိန် လပြည့်သည့်နှစ်တိုင်း ချန်းဟောကို ပူဇော်ကြသည်။ ထိုပွဲတော်ကို နွေဦးလယ်ပွဲတော် (Mid-Autumn Festival) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
မှော်ဆန်သောအပင်တစ်မျိုး လပေါ်၌ပေါက်လာသည်။ တန်ခိုးရှင် ဝုကန်းက ထိုအပင်ကိုသေးသည်ထက်သေးအောင်ခုတ်သည်။ မှော်အစွမ်းဖြင့် ကြီးလာပြန်သော် ဝုကန်းက ထပ်မံခုတ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အဆုံးမရှိသောလတိုင်း၌ဖြစ်ပေါ်သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။
မှော်အစွမ်းရှိသော ယုန်တစ်ကောင်လပေါ်၌ နေထိုင်သည်။ ထိုယုန်ကို လပြည့်လျှင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ယုန်မှာ မသေဆေးဖော်ရန် ကျည်၊ ကျည်ပွေ့ ဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေသည်။
တံဆိပ်ထုရန်အတွက် ဟင်္သပဒါးမင်များပါသော အိုးနှင့်အတူ လာဒ်ယူဆောင်ပေးသည့် ခြေသုံးချောင်းပါဖား
ခြေသုံးချောင်းဖြင့်ဖားတစ်ကောင် လပေါ်တွင်နေထိုင်၏။ လပြည့်ညများတွင် ထိုဖားမှာ အိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ လည်ပတ်ပြီး ဥစ္စာဓနကြွယ်စေသည့် သတင်းစကားများကို ထိုအိမ်၊ လုပ်ငန်းများက လက်ခံရရှိသည်။ ငွေဖားဟု လူသိများသည်။
တန်ခိုးစွမ်းအားမရှိသော သူများကို အုပ်စုတစ်ချို့ခွဲနိုင်ပြီး တစ်မျိုးစီကို သက်ဆိုင်ရာတစ်မျိုးမျိုးမှ အုပ်ချုပ်သည်။ လူများကို ဘုရင်ဧကရာဇ်က အုပ်ချုပ်၍ အတောင်ပါသောတိရစ္ဆာန်များကို မီးငှက်၊ နဂါးများကအုပ်ချုပ်ကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီလာ အကောင်များများတွင် နဂါး၊ မီးငှက်၊ မြင်းပျံနှင့် လိပ်၊ ငါး၊ ငါးကဲ့သို့သတ္တဝါများ၊ မြွေ၊ မြွေကဲ့သို့သတ္တဝါများ၊ ငှက်များ၊ လူနှင့်တူသောအကောင်များ၊ မြေခွေး၊ ခွေး၊ ကျွဲနွား၊ သိုးဆိတ်၊ မြင်း၊ကြောင်၊ ကြံ့၊ မျောက် စသဖြင့်များစွာပါဝင်သည်။
အသိဉာဉ်ရှိသော အကောင်လေးမျိုးမှာ နဂါး၊ မီးငှက်၊ မြင်းပျံနှင့် လိပ်တို့ဖြစ်၏။
ကြွေပန်းကန်လုံး၌ နဂါးတစ်ကောင် မီးတောက်ပုလဲတစ်လုံးနောက်လိုက်နေစဉ်
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၌ နဂါးများသည်အရေးကြီးဆုံးသော သတ္တဝါများဖြစ်ကြကာ အစွမ်းထက်ဆုံးသောသတ္တဝါများအဖြစ်ယူဆကြသည်။ ၎င်းတို့၏ အသက်ရှူထုတ်မှုမှ တိမ်ခိုးများဖြစ်စေကာ ရေထုကိုအစိုးရသည်။
နာမည်အကြီးဆုံးနဂါးဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမှာ ယင်းလုံ (Yinglong) ဖြစ်ပြီး မိုးနတ်ဖြစ်သည်။ နေရာဒေသများရှိလူတို့သည် ယင်းလုံကို ပသကြ၍ မိုးရစေရန် ဆုတောင်းကြ၏။ တရုတ်လူမျိုးများသည် 龍的傳人 ဝေါဟာရသုံး၍ ၎င်းတို့၏မျိုးရိုးဖြစ်တည်မှုအမှတ်လက္ခဏာအဖြစ်သုံးကြသည်။ အနက်မှာ နဂါးမျိုးဆက်များ (သို့) နဂါးမှဆင်းသက်လာသူများ ဖြစ်သည်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် များစွာသောဒဏ္ဍာရီလာအပင်များပါရှိသည်။ အချို့မှာ ကောင်ကင်ဘုံတွင်ပေါက်၍ အချို့မှာ ရှာရန်ခက်ခဲသောမြေပြင်တွင်ပေါက်ကြသည်။ နမူနာတစ်ချို့မှာ ဖူဆန်းပင်၊ မသေဆေး လင်ဇီးမှို၊ မသေဆေး မက်မွန်ပင်နှင့် မှော်အစွမ်းရှိသော ယောင်မြက်ပင်တို့ဖြစ်ကြ၏။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာ ဒဏ္ဍာရီလာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ရတနာများ၊ ပုလဲများ ကြေးပစ္စည်းများ၊ လက်နက်များပါဝင်သည်။ လိုတရ ရတနာ၊ အရောင်လဲ့နေသော ကျောက်မျက်များ၊ ထောက်သုံးထောက်ဖြင့် ဒယ်အိုးကြီးကိုးလုံး၊ ဟို့ရိ နေများကိုပစ်ခတ်ရာတွင်သုံးသော လေးနှင့် မြှား အစရှိသဖြင့် များစွာပါဝင်သည်။ ကွမ်းရီ၏ နဂါးစိမ်းလကွေးသဏ္ဌာန် ဓားလှံရှည်လည်းပါဝင်သည်။
အချို့ဒဏ္ဍာရီများသည် ပြဇာတ်၊ စာပေများ၌ ရှင်သန်ကြသည်။ အချို့မှာ တရုတ်ပြည်နှင့် အနီးတဝိုက်ဒေသများ၌ နှုတ်ဖြင့် စုစည်းထားမှုများဖြစ်သည်။ အစောဆုံးတရုတ်ဒဏ္ဍာရီရေးသားချက်များကို စာပေထက် ထွင်းထုထားမှုအတိုများတွင်တွေ့ရ၏။ အစောဆုံးသက်သေကို နွားရိုး/လိပ်ခွံများ၌ တွေ့ရသည်။ ရှန်းမင်းဆက် (အနီးစပ်ဆုံး ၁၀၄၆ ဘီစီ) ခန့်ကဖြစ်၏။
အစောဆုံး တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ ထွင်းထုထားမှုကို လွန်ခဲ့သော နှစ်သုံးထောင်ကျော်က လိပ်ခွံ (အခွံ) နှင့် အရိုးများတွင်တွေ့ရသည်။ဤအခွံများနှင့် အရိုးများ၌ ရှန်းမင်းဆက်နှောင်း ရှေ့ဖြစ်ဟောပညာရပ်လုပ်ဆောင်မှု၏ မှတ်တမ်းများကို ထွင်းထုထားသည်။
ကွေဟုခေါ်သော ဒယ်အိုးသဏ္ဌာန်ကြေးထည်ပစ္စည်း၊ ကျိုးမင်းဆက်ခေတ် ရိုးရာပစ္စည်း၊ အတွင်း၌ရေးသားချက်များကို မြင်ရုံမျှသာတွေ့ရ၏။ ဗြိတိသျှပြတိုက်
အလွန်ရှေးကျသော ကြေးထည်ပစ္စည်းများ (Bronze ​- ကြေးညို) များကို ကျိုးမင်းဆက်အစောပိုင်း (လွန်ခဲ့သောနှစ် (၃၀၀၀)) ခန့်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကြေးထည်များ၌ တရုတ်ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သော ခေတ်သစ်ဗဟုသုတများ ပေါင်းစပ်ထားသော သွယ်ဝိုက်ရေးသားချက် (သို့) ဖော်ပြချက်အတိုများ ပါဝင်သည်။ အချို့သော ဤထွင်းထုထားသောဖော်ပြချက်များ၌ပါရှိသည့် ဘာသာရေးဟန်၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော သဘောထားများကိုဖော်ပြပါရှိရာ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဖတ်ရှုရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သည့် အနေအထားများရှိ၏။ ဥပမာ အစားအစာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့် အိုးကြီးတစ်ခု၏ အတွင်းဘက်၌ရှိသော စာသားများမှာ ဖတ်ရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ရာ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှာ ထိုသို့သောရေးသားချက်များကို နတ်မင်းများက ဖတ်ခဲ့(နိုင်)ကြသည်။.
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီနယ်ပယ်ကို များစွာသောစာပေများက ဖော်ပြညွှန်းဆိုနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ဒဏ္ဍာရီကို တရည်တရွယ်သော်လည်းကောင်း၊ မတော်တဆသော်လည်းကောင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိသည်။ အချို့သောအရာများ၌ ဒဏ္ဍာရီသည် ဒဏ္ဍာရီနှင့်သက်ဆိုင်သောသဘာဝတစ်ခုနှင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မရှိသည့် စာပေလက်ရာများကို စေ့ဆော်အားပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်စာပေလက်ရာများ၊ အတွေးအခေါ်ပညာပေးလက်ရာများ၊ ခေတ်သစ်ဆန်သော ကွန်ပျူတာဂိမ်းများ၊ တရုတ်တို့၏ အာကာသ၊ ပင်လယ်ရေအောက်၊ ဝင်ရိုးစွန်းများရှာဖွေလေ့လာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမည်နာမများ စသဖြင့်တို့ဖြစ်သည်။ အစောဆုံးစာပေ/စာသားလက်ရာများသည် ကျိုးမင်းဆက်နှောင်း (အရှေ့ကျိုးခေတ် -ဘီစီ ၄၅၀မှ ၂၂၁) မှယနေ့အထိ ရှင်သန်လျက် ရှိသည်။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီအတွက် အဓိက စာပေရင်းမြစ်ခေတ်များမှာ ချင်မင်းဆက် (ဘီစီ ၂၂၁) မှ ဟန်မင်းဆက်နှောင်းပိုင်း (အေဒီ ၂၂၀) အထိ၊ ထို့နောက် နောင်လာသောမင်းဆက်ခေတ်များ (အေဒီ ၅၈၁) အထိဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကရှင်သန်နေသော စာပေ/စာသားများသည် ဒဏ္ဍာရီအောက်ခြေအလွှာ၏ ဆင့်ကဲတိုးတက်ပြေင်းလဲမှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည်။ စွေမင်းဆက်တည်ထောင်ချိန်မှ ထန်မင်းဆက်၊ စုန့်မင်းဆက် နှင့် မင်မင်းဆက် ကာလများအထိဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဤကာလများအတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခဲ့သော တရုတ်ဒဏ္ဍာရီသည် ယနေ့ခေတ်ရိုးရာပုံစံဟုယူဆထားကြသော အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Yang, An & Turner 2005, p. 4.
↑ Yang, An & Turner 2005, pp. 12–13.
↑ Werner 1922, p. 77.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Wu 1982, p. 51.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Christie 1968, p. 84.
↑ Wu 1982, p. 61.
↑ Wu 1982, pp. 56 and 100 n. 25.
↑ Wu 1982, p. 56.
↑ Birrell 1993, pp. 54–58.
↑ Birrell 1993, pp. 50–53.
↑ Wu 1982, pp. 43–105.
↑ Wu 1982, p. 55.
↑ Wu 1982, p. 50.
↑ Yang, An & Turner 2005, pp. 138.
↑ Birrell 1993, pp. 53–54.
↑ Wu 1982, p. 106.
↑ Wu 1982, pp. 116–117.
↑ Yang, An & Turner 2005, pp. 148–150 and 186.
↑ Legge 1899, Introduction.
↑ Siu 1968, "Preface" and "Introduction to the I Ching".
↑ Schafer 1963, pp. 273–275.
↑ Yang, An & Turner 2005, pp. 79–80.
↑ Birrell 1993, p. 14 and elsewhere.
↑ Barrett 2008, p. 31.
Barrett၊ T. H. (2008)။ The Woman Who Discovered Printing။ New Haven: Yale University Press။ ISBN 978-0-300-12728-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Birrell၊ Anne (1993)။ Chinese Mythology။ Baltimore: Johns Hopkins။ ISBN 0-8018-6183-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Christie၊ Anthony (1968)။ Chinese Mythology။ Feltham: Hamlyn Publishing။ ISBN 0600006379။ CS1 maint: ref=harv (link)
Eberhard၊ Wolfram (2003) ။ A Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought။ London, New York: Routledge။ ISBN 0-415-00228-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ferguson၊ John C. (1928)။ "China"။ Mythology of All Races။ Volume VIII။ Archeological Institute of America – via archive.org။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hawkes၊ David (2011) ။ The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets။ London, England: Penguin Books။ ISBN 978-0-14-044375-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Latourette၊ Kenneth Scott (1947)။ The Chinese: Their History and Culture (3rd Revised ed.)။ New York: Macmillan။ CS1 maint: ref=harv (link)
Legge၊ James (1963) ။ The I Ching: The Book of Changes Second Edition။ New York: Dover။ LCCN 63-19508။ CS1 maint: ref=harv (link)
Paludan၊ Ann (1998)။ Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China။ New York, NY: Thames and Hudson။ ISBN 0-500-05090-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Paper၊ Jordan D. (1995)။ The Spirits are Drunk: Comparative Approaches to Chinese Religion။ Albany, NY: State University of New York Press။ ISBN 0-7914-2315-8။ CS1 maint: ref=harv (link)
Schafer၊ Edward H. (1963)။ The Golden Peaches of Samarkand။ Berkeley, CA: University of California Press။ CS1 maint: ref=harv (link)
Sheppard၊ Odell (1930)။ The Lore of the Unicorn — Myths and Legends။ London: Random House UK။ ISBN 0-09-185135-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Siu၊ R. G. H. (1968)။ ""Preface" and "Introduction""။ The Man of Many Qualities: A Legacy of the I Ching။ Cambridge: Michigan Institute of Technology Press။ LCCN 68-18242။ CS1 maint: ref=harv (link)
Strassberg၊ Richard E., ed. (2018) ။ A Chinese Bestiary: Strange Creatures from the GUIDEWAYS THROUGH MOUNTAINS AND SEAS။ Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press။ ISBN 978-0-520-29851-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Werner၊ E.T.C. (1922)။ Myths and Legends of China။ New York: George G. Harrap & Co. Ltd.။ CS1 maint: ref=harv (link)
Wu၊ K. C. (1982)။ The Chinese Heritage။ New York, CA: Crown Publishers။ ISBN 0-517-54475X။ CS1 maint: ref=harv (link)
Yang၊ Lihui; An၊ Deming; Turner၊ Jessica Anderson (2005)။ Handbook of Chinese Mythology။ New York, NY: Oxford University Press။ ISBN 978-0-19-533263-6။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်ဒဏ္ဍာရီ&oldid=703964" မှ ရယူရန်